प्रदेश २ धनुषा लगायत सातवटै प्रदेशका व्यक्तिको रगत सङ्कलन गरिने,नेपालमा कोरोना संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने खतरा - Today Express
in Uncategorized, अर्थ र वाणिज्य, जनकपुर विशेष, जीवनशैली, टिभी कार्यक्रम, ताजा समाचार, रेडियो कार्यक्रम, सूचना प्रविधि
जनकपुरधाम । भदौ १७ गते । सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको भन्नेबारेमा अध्ययन गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सबै समूहका मानिसमा देखिरहेको र ट्राभल हिस्ट्रीमा नदेखिएका व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण देखिन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले समुदायमा फैलिएको हो वा होइन भन्ने अध्ययन गर्न थालेको हो ।
महाशाखाका निर्देशक डा।वासुदेव पाण्डेले अहिले ठूलो सङ्ख्यामा सबैमा सङ्क्रमण देखिन थालेपछि समुदायमा नै सङ्क्रमण फैलिएको कि भनेर अध्ययन गर्न थालिएको जानकारी दिए । यसअघि गत जेठ महिनामा महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ वा छैन भनेर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले उपत्यकामा समुदायस्तरमा सङ्क्रमण नफैलिएको बताएको थियो । त्यतिबेलाभन्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ । हिजोमात्र ४८१ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
“सङ्क्रमणको सूचक हेर्दा अहिले समुदायस्तरमा नै हो कि भन्ने देखाउँछ”, उनले भने, “अब अध्ययन गरेपछि मात्र समुदायमा सङ्क्रमण छ वा छैनन् भन्ने पुष्टि गर्दछ ।” महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन गर्न थालेको हो । अध्ययनका लागि महाशाखाले शुक्रबारसम्म कर्मचारी छनोट गर्ने र ती कर्मचारीलाई तालिम दिएर सातवटै प्रदेशमा रगत सङ्कलनका लागि पठाउने महाशाखा निर्देशक डा।पाण्डेले बताए ।
सातवटै प्रदेशमा सङ्क्रमण बढी फैलिएका ठाउँमा गई छ हप्तादेखि कतै नगएका व्यक्तिको रगत सङ्कलन गरिने छ । महिला, पुरुष, बालबालिका र वृद्धा सबैको एन्टिबडी परीक्षण गरिनेछ । एलाइजा विधिबाट एन्टिबडीको परीक्षण गरी नेपालमा समुदायस्तरमा फैलिएको छ वा छैन भन्ने पत्ता लाग्नेछ । सातवटै प्रदेशबाट सङ्कलन भएको रगतको नमूना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गरिनेछ ।
महाशाखाका निर्देशक डा।पाण्डेले अबको एक हप्तामा सातवटै प्रदेशमा रगतको नमूना सङ्कलन गर्नका लागि टोली जाने बताए । उनका अनुसार करिब एक महिनाभित्र समुदायस्तरमा फैलिएको हो वा होइन भनेर अध्ययन पूरा गरिनेछ । “पहिले ट्राभल हिस्ट्री भएका मानिसमा मात्र सङ्क्रमण देखिएको थियो”, उनले भने, “तर अहिले ट्राभल हिस्ट्री नभएका र समुदायमा रहेका व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ । काठमाडौँमा नै ट्राभल हिस्ट्री नभएका मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको छ ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा।जागेश्वर गौतमले समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएकाबारे अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले १२ जिल्लामा खासखास ठाउँमा (कलस्टर)मा सङ्क्रमण देखिएको बताए । “यहाँ समुदायमा सङ्क्रमण अझै फैलिएको छैन”, उनले भने, “बाह्र जिल्लामा क्लस्टरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने समुदायमा फैलिने डर छ ।”
अहिलेसम्म २२ हजार १७८ जना सङ्क्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन् । अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत डिस्चार्ज रहेका छन् । अहिले संस्थागत आइसोलेशनमा १० हजार ८३२ जना, होम आइसोलेशनमा सात हजार २८० जना र क्वारेन्टिनमा सात हजार ३९० जना रहेका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले समुदायमा सङ्क्रमण अझै गई नसकेको बताए । उनले सङ्क्रमणको सूचक हेर्दा नेपाल तेस्रो चरण प्रवेशका क्रममा रहेको बताए ।
प्रदेश २ सहित नेपालमा एकैदिन ३ हजार ४३९ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि,कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?(तथ्यांकसहित)
भीआईपीहरुमा पनि कोरोना संक्रमण,जोखिममा जोगिएर काम गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रिके निर्देशन
नेपालमा थप एकहजार १२० सङ्क्रमितसहित ४१ हजार ६४९ पुग्यो,कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २५१ पुग्यो
प्रदेश २ लगायत देशभर थप २ हजार ४४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,१९ जनाको मृत्यू, कुन जिल्लामा कति संक्रमित ? (तथ्यांकसहित)
पेस्तोल देखाएर रकम असुल्ने ५ जना हतियार सहित पक्राउ,तीन राउण्ड गोली पड्काए, तीन राउण्ड भेटियो
प्रदेश २ मा निषेधाज्ञा अटेर गर्ने छ जना व्यवसायीलाई एक महिना कैद, एक सय जरिवाना